Waan ognahay macaamiisha inay naga hadlayaan ... | Martech Zone
Waan ognahay macaamiisha inay nagala hadlayaan…
Axad, Sebtembar 6, 2009 Jimco, Janaayo 6, 2017 Douglas Karr
Shalay, waxaan ku qancay wareysiga Clint Page, Maamulaha Dotster, baraha bulshada dib ugu noqo maalgashi. Waxaan taageere u ahaa Dotster mudo haatan laga joogo 7 sano, qaddarinta aan u hayo shirkadda ayaa dib loo xaqiijiyay markii aan maqlay riyadii qarowday Shuruudaha Adeegga ee diiwaan geliyaasha kale ayaa ka faa'iideysanayay macaamiishooda.
2009 waa sanadkii baraha bulshada loogu talagalay Dotster Dotster wuxuu balaariyay oo shaqaalaysiiyay koox baraha bulshada kujirta natiijaduna horeyba waxay ahayd mid gaar ah Dotster wuxuu xitaa awood u yeeshay inuu horumariyo habab lagu cabiro ku soo noqo maalgashiga dadaalkeeda. Shirkaddu way arkaysaa kobcinta helitaanka macaamiil cusub, kasbasho haynta macaamiisha, Iyo xataa hoos u dhigista kharashka adeegga macaamiisha.
Waan ognahay macaamiisha inay naga hadlayaan… iyo waxaan dooneynay inaan qeyb ka noqono wada hadaladaas“, Ayuu yiri Clint.
Twitter waa halka ay ku taal
Dotster wuxuu arkaayaa inta badan wada sheekaysiga iyo fursada Twitter. Wadahadalladu waxay inta badan ku saabsan yihiin arrimaha khuseeya adeegga macaamiisha - sidaa darteed Dotster wuxuu awood u yeeshay inuu ka jawaabo labadaba su'aalaha iyo sidoo kale inuu tixgeliyo macmiilka tixgelin si loo horumariyo alaabadooda iyo adeegyadooda.
Waxaa jiray xoogaa xanuun sii kordhaya, laakiin Clint wuxuu sheegay in khibrada ugu weyn ee warbaahinta bulshada ay ahayd daawashada macaamiisha oo isu badalay u doodayaasha macaamiisha. Dotster waxay ogaatay in macaamiishoodu ay rabaan inay caawiyaan maxaa yeelay kaliya ma hagaajineyso shirkadda, laakiin ugu dambeyn waxay sidoo kale caawisaa macmiilka. Waqtiyada qaarkood, kooxda warbaahinta bulshada ayaa ka nixisay macaamiisha - macaamiishaas waligood kuma fikirin in qof uu shaqsi ahaan ula gaarayo shirkad sidan u weyn.
La macaamilidda macaamiisha ayaa shaqeyneysa. Shirkaddu waxay kordhineysaa adeegyadeeda qiimaha ku kordhay… aad u badan sidaa darteed waxay rumaysan yihiin inay dhaafi doonto adeegyadooda diiwaangelinta domainka. Adeegyadan dheeriga ah ayaa hoos u dhigay macaamiisha macaamiisha iyagoo ku daray adeegyadii ay horay macaamiisha uga heli jireen inay meel kale ka helaan laakiin waxay ka heli karaan qaybta ay ku jiraan Dotster ee alaabada iyo adeegyada.
Clint ayaa sheegtay in shirkaddu ay awood u yeelatay "inay ka shaqeyso sirdoonka wadajirka ah ee bulshada adeegsada Dotster."
Adeegsiga Beesha isticmaale Dotster
Dotster ayaa balaariyay adeegsiga warbaahinta bulshada, dhawaanahan olole fiidiyoow weyn oo loogu magac daray 'Big Big Small Business' Tartanku wuxuu u baahday macaamiisha inay soo geliyaan fiidiyow 2 daqiiqo ah iyagoo ka hadlaya ganacsigooda iyo adeegsigooda Dotster. Marka laga reebo saxaafadda weyn, abaalmarinta weyn ee abaalmarinta heshay $ 1,000 iyo abaalmarinta labaad waxay ahayd $ 500. Abaalmarinta saddexaad waxay ahayd xus sharaf leh oo ay ku xigtay $ 50 20-ka meheradood ee soo socda. Haddaad intaas ku darto, ka fikir dhammaan sheekooyinka waawayn ee Dotster lagu ururiyey $ 2,500! Ma xuma!
Halkan waxaa ku guuleystay, Taayirada Baaskiilka Toos:
Dotster wuxuu qirayaa inaysan khabiir ku ahayn baraha bulshada - khaladaad qaar ayaa laga sameeyay intii jidka lagu jiray. Waxaa taas ka sii muhiimsan, in kastoo ay yihiin Mu'miniinta warbaahinta bulshada! Macaamiisha ayaa weydiisanaya Dotster inuu wax hagaajiyo, haddii ay dhaqso uga jawaabaan oo ay dhageystaan ​​jawaab celinta, way guuleysan doonaan. Haddii aysan sidaas yeelin, waxay abuuraan waxa Clint ugu yeeray an faaruqinta macluumaadka - qof kale ayaa buuxin doona booska haray!
Dashboardka Warbaahinta Bulshada ee Maalinlaha ah
Clint wuxuu helaa dashboard warbaahinta bulshada ah oo uu maalin walba dib u eego. Warbixinta ayaa uruurineysa faallooyin taban, faallooyin togan, iyo wararka warshadaha. Waxaan u maleynayaa inay tahay wax xiiso leh in agaasimaha guud uu hubiyo in kormeerka caafimaadka warbaahinta bulshada ee shirkadiisa ay tahay qayb muhiim ah maalin kasta. Tani waxay noqon kartaa dashboard ay shirkaddaadu tahay inay fuliso!
Dotster waxoogaa ayuu ka soo kordhay diiwaan-hayaha - oo siiya shirkadaha martigelinaya, naqshadeynta goobta, horumarinta iyo nidaamyada maareynta maadooyinka. Dotster sidoo kale waxay bilawday Dotster Connect si ay uga caawiso shirkadaha inay horumariyaan shabakadooda bulshada. Waxay sidoo kale ku qoreen warqad cad oo cajiib ah oo ku saabsan xisaabinta soo celinta warbaahinta bulshada maalgashiga.
Aaway Soo Laabashadii Maalgashiga Warbaahinta Bulshada?
Dotster wuxuu tilmaamayaa fursado badan oo lagu kasban karo maalgashiga baraha bulshada. Iyadoo la tixraacayo calaamadeynta iyo dallacaadaha:
Yaraynta Kharashaadka Suuqgeynta
Iska yaree Qiimaha Qaadashada Macaamiisha
Hagaaji Sumcadda Sumcadda
Waxay sidoo kale arkaan soo-celinta tooska ah ee Adeegga Macaamiisha sidoo kale:
Yaree Qiimaha Xarunta Wicitaanka
Hagaaji Waqtiga Jawaabta Macaamiisha
Yaree Qiimaha Cilmi baarista
Iyo Dotster sidoo kale wuxuu ku dhiirrigelinayaa shirkadaha inay qaataan tiknoolajiyada warbaahinta bulshada gudaha, waxaa jira soo noqosho marka baraha bulshada la siinayo… tusaalooyinka qaarkood:
Iska yaree Miiska Caawinta Dusha
Tababbarka Hoose iyo Kharashaadka Safarka
Waxa ugu wanaagsan oo dhan, Dotster wuxuu cabirayaa soo laabashada maalgashiga ee la xiriira Daacadnimada Macaamiisha:
Hagaajinta Haynta Macaamiisha
Yaree Qiimaha Cilmi-baarista / Suuqgeynta
Kharashyada Qorista Hoose
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan bulshooyinka isticmaalaha iyo Dotster Connect, booqo websaydhka Dotster Connect ama wac 360-449-5900. Waxaan sidoo kale kugula talin lahaa 15 tilmaamood ee Dotster ee Beesha Guusha!
Sawir ka Maqaalka Portland Business Journal ee ku saabsan Dotster.
Tags: Taayirada baaskiil toos ahbogga cintTartankaDoodlewarbaahinta bulshadatartanka warbaahinta bulshadamaamuusayotartanka youtube